Jaamacada Rochester GPA, Dhibcaha SAT & Warbixinta ACT
Ardayda & Waalidiinta Imtixaannada Imtixaanka
Jaamacada Rochester GPA, SAT iyo ACT Data
01 ee 01
Jaamacada Rochester GPA, SAT iyo ACT Graph
Jaamacada Rochester GPA, Dhibcooyinka SAT iyo dhibcaha ACT ee loogu talagalay. Xogta macluumaadka Cappex.
Sidee ayaad ugu Qiyaasaysaa Jaamacada Rochester?
Xisaabi fursadahaaga helitaanka qalabkan bilaashka ah ee laga helo Cappex.
Ka doodista Jaamicadda Rochester ee qawaaniinta Ogolaanshaha:
In ka badan seddex meelood meel ka mid ah dhammaan codsadayaasha jaamacadda Rochester waa la aqbalayaa. Ardayda hela inay helaan dhibco imtixaan oo heerar ah iyo fasalada dugsiga sare oo aad uga sareeya celceliska. Jaantuska kor ku xusan, dhibcaha buluuga ah iyo kuwa cagaaran waxay u taagan yihiin ardayda qaata. Waxaad arki kartaa in inta badan codsadayaasha guuleysta ay leeyihiin celceliska dugsiga sare ee "A-" ama ka sarreeya, iskudhafka SAT ee 1250 ama ka sareeya, iyo buundooyinka ACT ee isku-dhafan 27 ama ka wanaagsan. Tirada codsadayaasha tiro badan ayaa leh 4.0 GPA.
Haddii natiijooyinkaaga SAT ama ACT ay u badan tahay inay wiiqi karaan codsigaaga Jaamicada Rochester, waxaad leedahay doorashooyin kale. Iskuulku wuxuu leeyahay 'nidaamka imtixaanka' tijaabada ah Taas macnaheedu waa U of R wuxuu u baahan yahay dhibcaha imtixaanka la cabbiray, laakiin waxaad soo gudbin kartaa dhibcooyinka imtixaannada aan ka ahayn SAT ama ACT imtixaannada maadooyinka SAT, Imtixaanada Meelaynta sare, iyo natiijooyinka imtixaanka Caalamiga Baccalaureate waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo si loo buuxiyo shuruudaha arjiga. Ardayda ka socota wadamo aan ahayn Mareykanka waxay leeyihiin fursado dheeraad ah oo lagu muujiyay bogga jaamacada ee ku saabsan siyaasadaha imtixaanka.
Dhibcaha wanaagsan iyo dhibcaha imtixaanka kali ahaan, si kastaba ha ahaatee, kuma soo geli doonaan Jaamacadda Rochester. Waxaad ogaan doontaa dhibco cas oo yar (ardayda la diiday) iyo dhibcaha jaalaha ah (ardayda liiska suga) oo lagu qasay cagaar iyo buluug inta badan garaafka. Ardayda qaarkood ee haysta buundooyinka iyo buundooyinka imtixaanka ee bartilmaameedka U ee R ma helin warqad aqbalaad ah. Ka soo horjeeda sidoo kale waa run - ardayda yar ayaa la aqbalay natiijooyinka imtixaanka iyo dhibcooyinka ka hooseeya heerka. Tani waa sababta oo ah Jaamacadda Rochester ee nidaamka ogeysiinta ee ku saleysan tirada badan. Jaamacadu waxay isticmaashaa Arjiga Guud oo leh oggolaansho dhammaystiran . Kala-hadhayaashu waxay fiirin doonaan culeyska koorsooyinka dugsiga sare , ma aha oo kaliya darajooyinkaada. Sidoo kale, waxay raadinayaan qoraallo guuleysi leh, waxqabadyo xiiso badan oo ka baxsan , jawaabo gaaban oo xoogan, iyo waraaqo xooggan ee talada . Ardaydu waxay sii xoojin karaan codsigooda iyaga oo bixinaya jawaab feker ah oo ku saabsan su'aalaha ku saabsan lifaaqan codsiga, iyo farshaxanada iyo cayaaraha ayaa soo bandhigi kara wixii ay ku guuleysteen ee ay ka mid yihiin "Common Art Art Supplement" iyo "Athletic Supplement".
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Jaamacada Rochester, GPA-da dugsiga sare, buundooyinka SAT iyo buundooyinka ACT, maqaalahani waxay ku caawin karaan:
Jaamacadda Rochester Aqoonsiga Ogolaanshaha
Waa maxay natiijada SAT ee wanaagsan?
Waa maxay Dhibicda ACT ee wanaagsan?
Maxaa Lagu Xakumay Diiwaanka Waxbarashada Fiican?
Waa maxay GPA-da La Culaysanyahay?
Maqaalada Lahaanshaha Jaamacada Rochester:
Dugsiyada sare ee New York
Iskuxidhka sare ee Atlantic Middle
Association of Jaamacadaha American
Jaamacada Ohio GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Rider GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Rutgers University Camden GPA, SAT iyo ACT Data
Washington iyo Lee GPA, SAT iyo ACT Data
Calvin College GPA, SAT iyo ACT Data
Gobolka Oregon GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Denver GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Jaamacada Mary Washington GPA, SAT iyo ACT Data
Waqooyi Galbeedka GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Jaamacadda North Carolina ee Greensboro GPA, SAT iyo ACT Data
Olin College GPA, SAT iyo ACT Data
10 Comics DC Waxay Ku Fiican Yihiin Akhristayaasha Cusub
Yaa ahaa Chemist ugu horeysay?
Sida Loo Isticmaalayo Ereyga Tijiga ah ee Talyaaniga
Dinosaurs, Reptoids iyo Reptilians
Dugsiyada Sare ee ugu sarreeya ee muusikada
6 Filim Cajiib ah
Finalka Caafimaadka Dhammaadka Heerka Daryeelka Usbuucyada Adult Young Adult
Hordhaca Aqoonsiyada Siyaasadeed
Halkee Luqad ka timid? (Sheekooyinka)
Cunto Hilib Cunto ah
Conjugations Italy: Truccarsi
Geometer Baalallay, Dhoobley, iyo Loopers: Geometridae Qoyska
Qodobbada Isku-dhafka (chemistry) Ka bilowda warqadda E
Dhaqanka Hallstatt - Dhaqanka Da'da hore ee Birta Dhaqanka
Muuqaal Sawir ah Dumarka Burcad-badeednimada ah, Mary Read
Howlaha Dabaasha ee Dabbaasha
Qiimaha Analogies ee Qorista iyo Hadalka
Top 40 Singer Singles ee dalka 2004
Waa inuu ogaadaa Shuruudaha Tennis Shuruudaha Faransiiska
Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Hip-Hop Dancing
Yaa leh cadaymaha caddaynta?
Sida Loo Qoro Qorshooyinka Dariiqada Waxtarka leh
Seraphim Malaa'igta: Iskuday Ilaahay
Sida loo abuuro Qoraalka Diiwaangelinta Homeschool